आमा छोरीको अपराध धन्दा : नशालु पदार्थ खुवाउने, ३ हजारमै बलात्कार गराउने ? ~ नेपाली समाचार | Latest News from Kathmandu, Nepal
आमा छोरीको अपराध धन्दा : नशालु पदार्थ खुवाउने, ३ हजारमै बलात्कार गराउने ?
By नेपाली कान्छा on 5:14 PM | nepali news, nepalnews, नेपाली खबर, समाचार | No comments
वीरगञ्ज । दुई छाक टार्नदेखि सम्पन्न बन्न मानिसहरुले के के नै गर्न छोडेका छन् र ? कर्मदेखि कुकर्म, धर्मदेखि अपराधसम्म धनी बन्नकै लागि मानिसहरु दिनरात लागिरहेका छन् । धनी बन्नकै लागी सिमरा जितपुरका एक आमा छोरीले गरेको अपराध निकै दर्दनाक छ ।
सिमराकी २१ वर्षीया सीनाराय कुर्मी र उनकी आमा पूर्णिमा राय कुर्मीले जीतपुर सिमरा उपमहानगर–१, पथलैयामा होटल संगालो एण्ड गेष्ट हाउस सञ्चालन गर्दै आएका छन् । गेष्ट हाउस खाना र बस्न मात्र हैन, यौन पिपासुको अखडा पनि बनेको तथ्य फेला परेको छ । दुई साताअघि पथलैयाबाट १७ वर्षीया किशोरी बेपत्ता थिइन् । परिवारले खोजखवरका लागि प्रहरीमा खवर गरे । इलाका प्रहरी कार्यालय, सिमराले किशोरीको खोज तल्लास गरयो । तर किशोरी अल्पाइन अस्पतालको बेडमा भेटिइन् । बेहोस अबस्थामा । लामो चिकित्सक उपचारपछि उनको होस खुल्यो तर कर्मी आमाछोरीको होस गुम्यो ।
कुर्मी आमाछोरीले किशोरीलाई ललाइफकाई आफ्नो होटलमा लगेछन् । त्यहाँ किशोरीलाई नसालु पेय पर्दाथ सेवन गराएर तीन हजारमा बलात्कार गराएको रहस्य खुल्यो । तीन हजार रुपैयामा युवतीलाई बलात्कार गराउने अपराध कुर्मी आमा छोरीले गरेको प्रहरी अनुसन्धानबाट खुल्न आएको छ । सिमराका डीएसपी गोविन्द पुरीले भने, नशालु पदार्थ सेवन गराएर, तीन हजारमा बलात्कार गराइएको तथ्य खुलेको छ ।
पीडितको बयानअनुसार पूर्णिमाले उनलाई आर्थिक प्रलोभन देखाउनुका साथै नशालु पेय पदार्थ खुवाएका थिइन् । त्यसपछि ढोका थुनेर राखिएको उनको भनाइ छ । भोलिपल्ट साँझ केही युवालाई पठाएर आफूमाथि जबरजस्तीकरणी गरिएको किशोरीले प्रहरीलाई बयान दिएकी छिन् ।
किशोरीलाई आर्थिक लाभसँगै कपडा र मोबाइल किनिदिने प्रलोभन देखाएर कर्मी आमा छोरीले आफ्नो होटलमा पुरयाएका थिए । ‘लठ्याउने कुरा खुवाएर पुरुषलाई खुशी पार्नुपर्ने बताएका थिए’, किशोरीले आफ्नो बयानमा भनेकी छिन् ।